Tattoo-ka Shiinaha Tifaftiraha Isku-hagaajinta Dhererka Madowga Nasashada Soo-saarista iyo Warshad | MOLONG
Gacanta maqaar tayo sare leh.
Lagu hagaajin karo 3 qodob oo kala duwan.
Si fudud loo qaado - La qaadan karo
Ku habboon kiis dacwadeed!
Qiime macquul ah - Tartan
Waara & Joogto ah & Xasilloon
Xulasho Fiican Tattoo Studio
Kursigan taatikada xirfadeed ee la qaadan karo ee la qaadan karo ayaa la hagaajin karaa iyada oo aan laga saarin qaybo ka mid ah.
Xabadku wuxuu si buuxda ugu habboon yahay raaxada weyn ee ragga iyo dumarka.
Kursiga, kursiga gacantiisa, suufka laabtiisa iyo kursiga madaxiisa ayaa si buuxda loo hagaajin karaa.
Nooca Shayga: Tattoo Armrest
Waxyaabaha: Birta + Faux Leather
Midabka Shayga: Madow
Cabbirka Madoobaadka Madoow: Qiyaas ahaan. 22 x 17 cm / 8.7 x 6.7 inji
Dhererka la hagaajin karo: Qiyaas ahaan. 83-136 cm / 31.5-52.8 inji
Qalabka taatikada xirfadeed ee gacanta
Waxaad ku hagaajin kartaa dhererka iyo silsiladda meelo kala duwan.
Naqshadaynta ergonomic waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku hagaajiso xagal kasta si aad uhesho shaqo kasta oo tattoo ah.
Riix badhanka oo gadaal iyo gadaal ugu jeedi xagalka aad rabto. Haddii aan ahayn udubdhexaad ama xagal uun baa u janjeera xagga hore ama gadaal
Saldhiggan gacantiisu way fududahay in la qaado safarka iyo bandhigyada tattoo.
Wuxuu u kala baxaa 3 qaybood oo runtii miisaan fudud iyo tiro yar
Saldhiggan gacantu sidoo kale waa mid waara oo fudud in la nadiifiyo.
Si buuxda loo hagaajin karo iyo waajibaadka culus
- suuf jilicsan oo raaxo leh gacmaha, lugaha ama cagaha nasashada.
- Naqshadaynta Ergonomic waxay kuu oggolaaneysaa inaad la jaanqaado xagal kasta (in ka badan 180 digrii) si aad ugu habboonaato wax kasta oo shucuur ah
- Dhererka la hagaajin karo ee baahiyaha kala duwan.
- Suuf jilicsan oo raaxo leh gacmaha, lugaha ama cagaha nasashada, kordhinta raaxada macmiilka.
- Qalabka loo yaqaan 'Tripod stand taagan' ayaa si joogto ah oo aan simbiriirixan ah u soconaynin (Lugaha birta leh dhammaadka caagga)
- La qaadan karo oo la laaban karo, fudud oo lagu kaydin karo ama la qaadi karo.
【Xirfad-yaqaan rest Tattoo-gacmeedka nasashada ee gacmaha iyo barkinta nasashada lugaha, suuf jilicsan oo qaro weyn ayaa ku siinaya adiga nasasho gacmaha, lugaha iyo cagaha nasashada, waxay ka dhigeysaa shaqadaada tattoo mid aad ugu habboon.
【Dherer La Isku Habeyn Karo】 Dhererka waxaa lagu hagaajin karaa 65cm ilaa 125cm si loo waafajiyo baahiyahaaga kala duwan, wuxuu adiga iyo macaamiishaada ku siinayaa khibrad aad u wanaagsan. Awood qaadasho xoog leh, istaandarka gacanta ayaa siin kara taageero ku filan dadka leh miisaanno kala duwan
【La furi karo rest Gacantaan nasashada ee nasashadu waa mid la furi karo, fudud oo la keydin karo lana qaadi karo, waxay kuu keydineysaa meel badan oo aad ku keydiso marka aadan u baahnayn istaagga safarka. Suufku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hagaajiso wax ka badan 180 xagal darajo ah oo loogu talagalay shaqo kasta oo tattoo ah.
【Lugaha birta ah ee loo yaqaan 'Anti-Skid'】 Tripod lugaha birta leh dhammaadka caagku waxay bixiyaan degganaansho loogu talagalay tattooing, Ka-hortagga taraafikada iyadoon dhulka la xoqin, aad wax ku ool ah oo waara. Wax soo saarka ku habboon ee loogu talagalay salootada xirfadeed ama farshaxanka shakhsi ahaaneed.
Service Adeeg Hal-Hal ah】 Haddii aad wax su'aal ah ka qabtid alaabtayada, fadlan nala soo xiriir email ahaan. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad xalliso dhibaatada. Adeegga macaamiisha ee gaarka ahi waa waxa aan qabanno!
Hore: Mashiinka Kaydadka Tattoo 3 KingKong
Xiga: La tuuri karo silikoon lagu xajin karo qaboojiyaha qaboojiyaha (25pcs / box)
Dherer la hagaajin karo ahama Tattoo Arm Re ...